‘ट्रम्प संसारलाई थर्काउँदै हिंड्थे, बंकरमा लुक्नुपर्यो, मन्त्रीजीहरुले विचार गर्नुहोला’ « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
‘ट्रम्प संसारलाई थर्काउँदै हिंड्थे, बंकरमा लुक्नुपर्यो, मन्त्रीजीहरुले विचार गर्नुहोला’
प्रकाशित मिति : २०७७, २५ जेष्ठ आईतवार १२:५८
काठमाडौं । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी कुनै हालतमा पास गर्न नहुने बताएका छन् । आइतबारको संसद बैठकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा सुवालले जापानको हिरोसिमामा बम खसाल्ने अमेरिकाले काठमाडौंमा खसाल्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? भन्दै एमसीसी पास गर्न नहुने बताएका हुन् ।
उनले बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको कर बढाउने घोषणा हुँदै गर्दा त्यसको सूचना चुहाएर भन्सारबाट गाडी छुटाएको भन्दै सूचना चुहाउनेमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । विजुलीको महसुल घटाएर ग्यास आयात पूर्ण रुपमा बन्द गर्न उनले आग्रह गरे । उनले भने, ‘मन्त्री भएर खुुसी हुने होइन, देश हार्ने विदेशी जित्ने किन ? सात पुस्ता नर्क जाने बारेमा सोच्नु होला । तपाईंका नाती पनातीले कविता लेख्नेछन् मेरा पिता पुर्खा मन्त्री भएर देश बेचेछन् भनेर । त्यसैले एमसीसीमा सही गर्ने मन्त्रीले विचार गर्नुहोला । राणाले नेपालीलाई दमन गरेका थिए पछि भारत भाग्नु पर्यो ।’
गोरखापत्रका पूर्वमहाप्रवन्धकहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने, आइजिपीहरुको त्यस्तै भएको भन्दै उनले त्यो बेला कुन कुन मन्त्री थिए र उनीहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई कस्तो तालिम दिएछन् त्यसका बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई अर्बौं रुपैयाँ बजेट छुट्याउने तर ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजको विधेयक पेश नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘मोदी हिन्दूवादी हुन् विचार गर्नुहोला्, इटलीको शासकलाई क्याथोलिक चर्चले समर्थन गर्यो पछि क्याथोलिक देश जति हाम्रो हो भन्दै हिंड्यो ।’ दुई दुई जना सचिव राख्ने मन्त्रीहरुका बारेमा छानबिन गर्न उनले माग गरे ।
उनले समाजवाद कागजमा लेखेर नहुने बताए। उनले भने,‘कारखानाको सूची लेखेर उद्योग चल्छ ? समृद्धि लेखेर समृद्धि हुन्छ ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतलनिवास ठगको घेराबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताए । पार्टी कार्यकर्तालाई पार्टी कार्यालयमा भेट्नुपर्ने भन्दै ठग कार्यकर्ताबाट मुक्त गराउन आग्रह गरे ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रिलाई राजशी ठाँटमा राख्न नहुने भन्दै बजेट घटाउन माग गरे । छोराछोरी जन्माएर विदेशी सेना बनाउने हो ? भन्दै उनले गोर्खा सैनिक भर्ती बन्द गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘ट्रम्प संसारलाई थर्काउँदै हिंड्थे, बंकरमा लुक्नुपर्यो मन्त्रीजीहरुले विचार गर्नुहोला ।’
ढकाललाई नेपाली साहित्यमा विद्यावारिधि
काठमाडौँ । खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन, प्रगति गर्ने मान्छेलाई वाधा व्यवधानले कहिल्यै रोक्दैन